Madaxweynaha Soomaaliya oo u safray dalka Ingiriiska si uu uga qeybgalo shir-weynaha Soomaalida ee London - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo u safray dalka Ingiriiska si uu uga qeybgalo shir-weynaha Soomaalida ee London
May 9, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. [Xigashada Sawirka: AP]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u safray dalka Ingiriiska si uu uga qeybgalo shir-weynaha Soomaalida ee London, kaasoo maalinta Khamiista ka furmi doona gudaha magaalada London.
Ujeedada shirka ayaa waxa uu yahay sidii loo dardargelin lahaa horumarka ku saabsan dib u hagaajinta dhanka ammaanka iyo in lagu heshiiyo iskaashi caalami ah oo cusub oo loo baahanyahay si ay Soomaaliya u gaarto nabad iyo barwaaqo sanadka 2020.
Dhowr kamid saaxiibada Soomaaliya ayaa la filayaa in ay ka qayb galaan shirka.
Damascus-(Puntland Mirror) Afhayeenka ugu weynaa ee ururka ISIS, Abu Maxamed Al-cadnaani ayaa lagu dilay gobolka Aleppo ee dalka Suuriya, sida uu sheegay website-ka ku dhow kooxda ISIS. Website-ka Amaq oo kamid ah warbaahinta lala xiriiriyo [...]